संसदीय सुनवाइमा उपाध्यायको प्रतिप्रश्न काल्पनिक अभियोजन लिएर हामी कहाँ पुग्ने हो ?
NST: शुक्रवार, ०१:५२ | ८ मंसिर, २०७४ | 24th November 2017
काठमाडौ १२ असोज – मलाई पहिलो सरकारकारले नियुक्त गर्दा एमाले पनि सँगै थियो । त्यसअनुसार मैले १३ महिना भारतमा राजदूत भएर काम गरे । कस्तो संयोग भयो, भने मैले काम गर्न सुरु गरेको १२ दिनमै नेपालमा भूकम्प गयो । भूकम्पका बेला मैले निर्वाह गरेको भूमिकाका विषयमा यहाँ भनिराख्नु पर्दैन ।
के मात्रै ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने खासगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भारतीय सरकार, भारतीय संसद, भारतीय पार्टीहरु र भारतीय जनताले एकदमै ठूलो सद्भाव देखाए । र सवैभन्दा पहिला अग्रणी भूमिकामा भारतको सहयोग रह्यो ।
त्यसपछि अनन्त संक्रमणमा रहेको हाम्रो राजनीति, हामी सवैको चाहना अनुसार संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । त्यसपछि नेपाल र भारतको संवन्धमा, नजानिदो किसिमको असम्झदारी देखा पर्यो । त्यसैको फलस्वरुप नेपाली जनताले अकल्पनीय दुःख,कष्ट र नाकावन्दी खासगरी सामानको अभावको मार खेप्नु पर्यो । मैले त्यस समयमा भारतमा र नेपालका संचार माध्यमहरुमा बोलेका कुराहरु माननीय सभापति र सांसद ज्यूहरुलाई अवगतनै हुनुपर्दछ ।
खास गरेर अक्टोबर ४, २०१५ मा नाकावन्दीको सुरुसुरुकै अवस्था थियो । नाकावन्दीका कारण नेपाली जनताले दुःख पाउनुहुँदैन । नाकावन्दीको वारेमा हाम्रा प्रतिपक्षमा रहेका खासगरि मधेस केन्द्रित दलहरुले नेपालमा तथा भारतमा गएर समेत अभिव्यक्त गरेको अवस्था थियो की ‘हाम्रो कारणले राजनीतिक कारणले अबरोध भएको हो भनेर ।’
तरपनि मैले, एउटा मात्र नाका छ, कलकत्ता वोर्डरको कारणले वीरगन्जको आफ्नो भूमिका छ । तर पनि अरु नाकावाट सामान जान सकेन, कित हामीले रोकेका छौँ भनेर रोकिनु पर्यो । होइन भने नेपाली जनताले जस्ले ‘अफोर्ड’ गर्न सक्दैनन् । नेपालको इकोनोमी अहिले डिप्रेशनमा छ । त्यसैले नाकावन्दी हट्नु पर्छ, सरल हुनुपर्छ भनेर अहिलेको सत्तारुढ पार्टी भारतीय जनता पार्टीका नेताहरु र अरु तहका नेताहरुलाई पनि भनेको थिए ।
हामी खासगरि पूर्विय दर्शन फ्लो गर्छौँ । म पनि त्यसको एउटा अनुयायी हुँ । हामी हाम्रो संस्कृति परम्परामा युद्ध पनि हुन्छ । युद्ध हुँदा खेरि शंख ध्वनी गरेर अब युद्ध सुरु भयो र साँझ युद्ध बन्द भयो भनेर गर्ने परम्परा भएका मानिस हौँ । यही उदाहरण दिएर नेपाली जनताले किन दुःख भोग्नु पर्यो भनेर कुरा गरे ।
युद्ध हुँदा खेरि शंख ध्वनी गरेर अब युद्ध सुरु भयो र साँझ युद्ध बन्द भयो भनेर गर्ने परम्परा भएका मानिस हौँ ।
त्यहाँ हुँदा ‘इन्डीया टाइम्स’ मा दिएको अन्र्तवार्तालाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणी पनि आए । त्यहाँ मैले भनेको थिए, ‘इतिहासको विरासतमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध छ, कुनै एक जना नेताको कारणले विग्रने, भत्कने हुनुहुँदैन । यो हाम्रो अन्य मुलुकसँग तुलनानै गर्न नसकिने संवन्धलाई, विगार्नुहुँदैन भनेर अनुरोध गर्दा खेरि अन्र्तवार्तामा भारतले समयमै त्रुटिको महसुस गर्नुपर्यो । त्यतिबेला धष्िि तगचल तय ऋजष्लब ष क्ष्लमष्ब उगकज या तजभ धबिि भने पछि यतिधेरै चर्चा भयो ।’ त्यसपछि नेपालमा यी कुराहरु आए ।
म विश्वास दिलाउन चाहन्छु मानिस भएको नाताले केही हाम्रा दायित्वहरु पनि हुन्छन् । त्यसछि हामी नेपाली हौँ । नेपाली जनता प्रति र राष्ट्रप्रतिको दायित्वमा मैले सकेको विवेक प्रयोग गरेर काम गरेको कुरा नेपाल र भातरीय संचार माध्यमहरुले राखेकै छन् ।
खास गरेर आपुर्ति मन्त्रालय, आयल निगमसँग सम्पर्कमा रहेर असहज स्थीतिलाई कसरी सहज पार्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारसँग गरेका कामहरु, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा त्यहाँ गरेका कुराहरु यहाँ ध्यानाकर्षण मात्रै गराउन चाहन्छु ।
राजनीति र कुटनीतिमा मेरो अनुभवले के देखाउँछ भने, यो शान्ति, सम्यमता र निरन्तरता र मर्यादा सहितको सम्बन्ध हुनुपर्छ । साना तिना घटनाले हाम्रो सम्बन्धमा कुनै असर पर्नुहुँदैन । हामी भू राजनीतिक अवस्थामा हामी छौँ । मित्र राष्ट्र भारत प्रति, मित्र राष्ट्र चीन प्रतिको सम्बन्ध मर्यादित र कुटनीतिक हिसाबले हुनुपर्दछ ।
म एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ । मेरो संलग्नता नेपाली कांग्रेसँग थियो । तर मैले नियुक्त हुने वित्तिकै, नेपालको संविधानले राजनीतिक पदकै कारण कुनैपनि बाधा नगरेपनि, नैतिकताका आधारमा आदरणीय नेताहरुलाई भेटेर मैले पार्टीका सम्पूर्ण पदबाट मुक्त हुँदै राजीनामा दिएको थिए । त्यसपछि म एउटा ‘न्यूटल’ व्यक्ति भएर भारतमा गएको थिए ।
म एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ । मेरो संलग्नता नेपाली कांग्रेसँग थियो ।
त्यसपछि सरकार फेरियो, मेरो नैतिक कर्तव्य हुन्छ । किन भने राजदूत भनेको राज्यको दूत हो । उसले काम गर्दा सरकारसँग अत्यन्त विश्वासका साथमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार परिवर्तन लगत्तै, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई सोधेर, उहाँहरुकै सल्लाहमा तपाईको भूमिका सकारात्मक छ, भनेर भनेपछि मैले लगातार राजदूत पदमा काम गरेको हुँ । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका धेरै राजनीतिक घटाक्रमहरु भए । नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय महाधिबेशन भयो, ती घटनाक्रमहरुमा मैले आफ्नो प्रत्यक्ष राजनीतिक संलग्नता देखाइन । मैले आफ्नो नैतिकता, आदर्श र मूल्य मान्यतालाई कसरी राख्नुपर्छ भन्नेमा हर हमेसा सचेत रहेको छु । यो संयोग हो, हामी वाचुन्जेल विभिन्न दायित्वमा हामी हुन्छौँ । नेपाली जनता प्रतिको दायित्व हाम्रो अविछिन्न हो । त्यसमा म सजग रहेको जानकारी गराउँदछु ।
नेपाल र भारतको जुन विशेष खालको सम्बन्ध छ, कुटनीतिक क्षेत्रमा भन्नुपर्दा राजनीतिक विषयमा दिल्ली दूतावास निर्णायक हुने गर्छ । तर लामो समय सम्म राजदूत खाली राख्ने, र अरु कारणले गर्दा खेरी हाम्रो ‘पव्लीक डिप्लोमेसी’ नपुगेको मैले महशुस गरेको छु ।नयाँ दिल्लीको मुटुमा रहेको राजदूतावासलाई मास्टर प्लान बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने अबधारणाको सुरुवात मैले गरेको थिए ।
नेपाल र भारतका व्यापारको विषयमा मैले त्यहाँका नेताहरुलाई भन्ने गरेको थिए ,नेपाललाई अनुदान सहयोग भन्दा पनि नेपालसँग ट्रेडको इन्गेज धेरै गरौँ । यसले मात्रै नेपाल भारत व्यापार घाटा घटाउन सक्छ । नयाँ नयाँ योजनाहरु सुरु गर्नुभन्दा पनि पुराना नदी नालाका संझौताहरु कार्यान्वयन भएको छैन । यसको कार्यान्व्यन हुनुपर्दछ । खास गरेर डुवानको समस्या समाधानकालागि प्रष्टसँग सरकारका तर्फबाट राख्ने प्रयास मैले गरेको हो । नेपाल सार्वभौम मुलुक भएकाले हाम्रो सहमति वेगर कतैपनि सिमानामा नयाँ संरचनाहरु बन्नुहुँदैन । ती बनेका संरचनाबाट नेपालका भू भाग डुवानमा परेकाले यो काम राम्रो भएन यसमा पुर्नविचार गर्न भनेको थिए । अब फेरि भारत गएपछि यी कुराहरु मेरो प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।
नयाँ दिल्लीको मुटुमा रहेको राजदूतावासलाई मास्टर प्लान बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने अबधारणाको सुरुवात मैले गरेको थिए ।
सत्य जहिले पनि एउटा मात्रै हुन्छ । ‘नलेज’ र ‘विसडम’ भन्ने कुरा कहिले पनि पूर्ण हुँदैन । मानिसले जीवन कालमा धेरै ठूला ठूला डिग्रीहरु लिन सक्छ तर त्यो पूर्ण हुँदैन । जन्म देखि मृत्यु सम्मको समय एउटा सिक्ने पाठशाला हो । अहिले पनि नेपालमा अझै समस्याहरु छन् । समस्या समाधान गर्ने विषयमा नेपालको एउटा सोँच हुनुपर्दछ । नेपालको एउटा पक्ष हुनुपर्दछ । यो कुराको विषयमा हामी विभाजित भयौँ भने समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ ।
एउटा सरकारले नियुक्त गरेको मलाई अर्को सरकारले फिर्ता गरेको कुरा मैले त्यतिबेला पनि एकदमै सहजताका साथ स्वीकार गरेको कुरा त्यतिबेलाका संचार माध्यमबाट पनि तपाईहरुलाई थाहाँ भएकै छ । सरकारको राजनीतिक निर्णय हो, विशेषाधिकार हुन्छ । सरकारले म भन्दा राम्रो व्यक्ति पठाएर छिटो छरितो सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन पर्छ भनेको थिए । त्यसपछि मैले अहिले सम्म कतैपनि नकारात्मक बक्तव्य बाजी गरेको छैन ।
त्यति बेला भनेको थिए , म राजनीति गर्ने व्यक्ति भएको नाताले नैतिकताको आधारमा मलाई अदालती अभियोजन चाहिदँैन । मेरो विषयमा यदी कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छ भने देखाउनुस प्रमाणीत भए सार्वजनिक जीवनबाटै राजीनामा गर्छु । भनेर अभिव्यक्ति दिएको थिए । यो कुरा आजपनि दोहोर्याउन चाहन्छु ।
देशको समस्या समाधानका विषयमा हामी सवैको समान दृष्टिकोण रहनै पर्दछ । पहिला समस्या र सत्यलाई पहिचान गरौँ ।राजदूतको भूमिका सल्लाह दिने मात्रै हो । निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको मात्रै हुन्छ । खासगरि नेपालकी राष्ट्रपति ज्यूको अन्तिम समयमा भ्रमण स्थगनका कुराहरु गए, त्यो समयमा मैले आफ्नो सल्लाह दिएकै हुँ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण पछि जुन सहजता आएको छ, राष्ट्रपतिको भ्रमणले थप सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सरकारले अर्कै निर्णय गर्यो । साथमा मलाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय भयो ।
तर अहिलेको सरकारले म अमेरिकामा पारिवारिक भ्रमणमा २ महिनाका लागि गएको थिए । म अमेरिकामा रहेका बेला नेपालका बुद्धिजिवी क्षेत्रबाट, नागरिक समाजबाट, संचार माध्यमहरुबाट दीपकुमार जी प्रति अलि मन्त्रिपरिषदबाट ठाडो निर्णयका आधारमा फिर्ता बोलाउँदा अन्याय भयो की भन्ने टिप्पणीहरु आएको पाए । यसप्रति म सवैमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।
सुरुमा आफ्ना धारणा राखेपछि प्रस्तावित राजदूत उपाध्यायलाई सांसदहरुले प्रश्न गरेका थिए
उहाँ राजनीतिकर्मी, उहाँको इतिहास हेर्दा, नेपाली कांग्रेसको वरिष्ठ नेतामा पर्नुहुन्छ । दुई पटक मन्त्री पनि हुनुभएको रहिछ । अहिले यो प्रस्तावित राजदूत पद भनेको मर्यादाक्रममा सह सचिब सरहको पद हो । उहाँलाई प्रश्न छ के राजनीतिमा विकृतिहरु देख्नुभयो, विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको मान्छे राजनीति छोडेर सहसचिब पदमा जानुभयो । फेरि भारतबाट फर्कने वित्तिकै अमेरिका गए, भनेर भन्नुभयो । यसो हेर्दा उहाँलाई राजनीति प्रति मात्रै नभई नेपाल प्रतिनै वितृष्णा जागेको जस्तो देखियो ।
नेपाल भारत सम्बन्ध उतार चढाव भइरहने कुरा हो । तर यहाँको कार्यकालमा सम्बन्ध सुदृढिकरणमा के योगदान रह्यो । केही पनि योगदान नरहेकाले अघिल्लो सरकारले कार्यसम्पादनमा असफल ठहराउँदै फिर्ता बोलाइएको हो ।त्यसैले तपाईलाई सर्थन गर्न गाह्रो भएको छ । यसअघि फिर्ता बोलाइनुका कारण दिनुहोला । त्यही ठाउँमा प्रस्तावित हुँदा अप्ठेरो महशुस भएको छ की छैन । भारतको सट्टा अरुनै देश रोजेको भए अत्यन्त राम्रो हुने थियो की । हाम्रो लोकतन्त्र कलिलो भएर पनि होला, एउटा सरकारले फिर्ता बोलाउने अर्को सरकारले पठाउने गर्छ । तपाईले भारत गएर राम्रो काम गर्नुहुन्छ भन्नेमा आशावादी छैन ।
तपाईलाई प्रश्न गर्नुपर्दा अप्ठेरो लागेको छ । उहाँ राजनीतिमा लागेर राम्रो काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने मैले बुझेकी छु । वास्तवमा भारतको राजदूत भएर जानै नहुने थियो । संविधान जारी भएको छ । त्यसपछि नाकावन्दी खेप्नु पर्छ । यस्तो अवस्थामा उहाँ जस्तो बौद्धिक व्यक्तित्व भएपनि देशको हितमा भूमिका खेल्नु भएन भन्ने अहिलेको उजुरीबाट पनि देखिन्छ । सर्वसाधारणले पनि राम्रो भूमिका खेल्नु भएन भनेका छन् । तपाईले राम्रो भूमिका खेल्नु हुन्छ भन्ने विश्वासनै छैन, हामीलाई ।
तपाई गएको १२ दिनमा भुकम्प गएको थियो । तर तपाई फिर्ता हुँदा पहिलाको भूकम्प भन्दा राजनीतिमा भूकम्प ठूलो लिएर आउनुभयो । यो पराकम्म भइरहँदा फेरि राजदूतकालागि सिफरिस हुँदा तपाईले कस्तो अनुभूति गर्नुभयो । कांग्रेस एमालेको सरकार हुँदा तपाई जानुभयो । एमाले माओवादीको सरकार हुँदा फिर्ता हुनुभयो, फेरि माओवादी कांग्रेसको सरकार हुँदा फेरि जाँदै हुनुुहुन्छ कुटनीतिक बृत्तमा जे बुझिएपनि तपाई त एउटा राजनीतिक बृत्तमा फुटबल जस्तै हुनुभएको छ । अरु राजदूतका हकमा यस्तो नहुने तपाईकै हकमा हुनुलाई कसरी लिनुभएको छ । यस्तो राजनीतिक खेल भइरह्यो भने तपाईको सुनुवाई त नौ नौ महिनामा गरिरहनु पर्ने अवस्था देखियो ।
नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय पनि अमेरिकाको राजदूत हुनभएको थियो
यसअघि तपाई समग्र देशको प्रतिनिधी भएर जाने वातावरण थियो । अहिले बैधानिक हिसाबले राष्ट्रको प्रतिनिधी भएपनि तपाई अहिले दलको वा दलको सत्ता स्वार्थ पुरा गर्ने एउटा प्रतिशोधको मिसन पुरा गर्ने विम्ब भएर जाँदै हुनुहुन्छ । तपाई सवैको भनेर जाने अवस्था त देखिएन ।
यहाँले भन्नुभयो, भारतमा रहँदा पव्लीक डिप्लोमेसीको अवधारण अघि बढाउन खोजेको थिए, यो कसरी हुन्छ । तपाईलाई के महत्व छ भारतमा फेरि राजदूत भएर जान खोज्नुभयो । तपाईले अब गएर राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने के हो आधार ।
एउटा राजनीतिक मान्छे राजदूत हुनुहुँदैन भन्ने कुरा त मैले देखेको छैन । नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय पनि अमेरिकाको राजदूत हुनभएको थियो । किन पठाइन्छ राजदूतमा भने, राजदूतले अहिलेको परिस्थीतिमा राज्यको प्रतिनिधीत्व गर्ने हो । यति गर्दा राजदूतले देशको झण्डा पनि फहराएर हिँड्छ । भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नकै लागि राजदूत पदमा राजनीतिक व्यक्तिनै पठाउनुपर्छ ।
नेपाल भारत संबन्ध सुधारकालागि प्रस्तावित राजदूत दीपकुमार उपाध्यायको विवेकशिलता काम लाग्छ । अहिले रुकेका कामहरुलाई दीपकुमार गएपछि अघि बढ्ने छन् भन्ने विश्वास पनि छ । नेपाल भारत सम्बन्ध सुधारका ठोस योजनाहरु के छन् ?
नेपालले भारत, चीन र अमेरिकाले विशेष महत्व दिने गर्छ । त्यसकारण पूर्व मन्त्रीहरु, परराष्ट्रमन्त्रीहरु पनि राजदूत भएको इतिहास हो । कुनैपनि मुलुकसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्नलाई राजनीतिक व्यक्तिनै पठाउन उपयुक्त हुन्छ । भारतसँग सम्बन्ध विग्रनुको जडमा हामी पुग्नु पर्छ ।
नसोधे पनि हुने थियो, तर केही प्रश्न उव्जीयो । हामीले प्रस्तावित राजदूतको प्रतिबद्धता तत्काल चाहेका हाँैँ । उहाँमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ खोजेका हाँै । तर उहाँको सामून्यमा हामीले पक्ष र विपक्षमा कुरा राखी रहेका छौँ । हामी सबैले बुझेका छौँ , फिर्ता किन हुनुभयो र अब फेरि किन पठाउँदै छौँ भनेर ।
यस्ताे छ प्रस्तावित राजदुत उपाध्यायकाे जवाफ
मेरो पूर्व निर्णयमा पनि मन्त्रीस्तरीय कुटनीतिक मर्यादा सहितको भन्ने अहिले पनि छ त्यसकारणले गर्दा सहसचिव स्तरको पद भन्ने होइन । त्यसमा म आज यो समिति मार्फत नेपालका मुख्यसचिव लागाएत नेपाल सरकारका सम्पूर्ण प्रशासन यन्त्रलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।
मैले आफ्नो काम गर्नेृ शिलशीलामा अत्यन्त त्यो मर्यादाको पालना भएको पाएको छु । जहिले पनि जहाँ पनि उच्चस्तरीय भेटघाटमा उहाँहरुले एउटा मन्त्री, स्तरीय मर्यादालाई ख्याल गरेर अगाडि सारेर गर्नुभएको छ त्यसकारण हामीलेृ त्यसमा आशंका गरिरहुपर्ने आवाश्यक छैन ।
त्यस्तै यहाँ जिज्ञासा उठ्यो म कतै राजनीतिक रुपमा अमेरिका गएको चाहि पलाएन नै गरेको हो की या फर्किनु परेको पिडाले पो हो की भन्न प्रश्न छ तर त्यो पटक्कै होइन । मेरी कान्छी छोरी अमेरिका छिन् । ६ वर्ष भएछ भेटघाट नभएको यस्तै ब्यस्तताले फूर्सद नपाएर जान पाएको थिइन अत्यन्त एउटा पारिवारिक दवाव हुन्छ नै फूर्सदमा पनि नआउने भनेपछि बाध्यतावस गएँ । र सात हप्ता त्यहाँ बस्ताखेरी मैले नेपाललाई नियालेर हेरे ।
आफ्नो किसिमबाट अलिकति टाढाबाट हेर्दाखेरी समस्याहरु छन् । त्ससको समाधानान अझै पनि हामी बिभाजित मनस्थितिमा जानुभन्दा नेपाललाई एउटा पक्षमा नेपालका समस्यालाई समग्रका एउटा पक्षमा हेर्नुपर्नेमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो सन्दर्भमा जुन मैले पब्लिक डिप्लोमेसीमा नेपालको रिचको कुरा गरेँ अब आफूस्ले गरेको कुरा आफूले भन्नु राम्रो हुँदैन । त्यो बेलाका सञ्चारमाध्यमलाई हेर्ने हो भने भारतको इतिहासमा पहिलोचोटी राज्य सभामा नेपालको बारेमा छुटटै बहस उठ्यो, भारतको पर्राष्ट्र मन्त्रालयमा जुन किसिमको बहस भो त्यसमा नेपाल सरकार हामी सबै मिलेर एउटा के भने इनपुट त हामीले दियौँ तर त्यती बहस उठ्यो नेपालसँको हुँदो खाँदाको सम्बन्ध किन यसरी अकस्मात बिग्रियो भन्ने बारेमा त्यो मलाई लाग्द छ त्यसले एउठा निकै ठूलो भूस्मिका खेल्दछ ।
आफ्नो किसिमबाट अलिकति टाढाबाट हेर्दाखेरी समस्याहरु छन् । त्ससको समाधानान अझै पनि हामी बिभाजित मनस्थितिमा जानुभन्दा नेपाललाई एउटा पक्षमा नेपालका समस्यालाई समग्रका एउटा पक्षमा हेर्नुपर्नेमा जानुपर्छ
तयसैले हामीले यस्ता कुराहरुमा नकारात्ममक सोच राख्न भन्दा सकारात्मक हुनै पर्दछ । मैले अत्यन्त बिनम्रतय पूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु की मैले कहिले पनि आफ्नो जीवनकालमामा द्वध चरित्र देखाएको छैन । आफ्नो वाणीमा आफ्नो कर्ममा मैले इमानदार नै भएको छु ।
मेरो नेपाली कांग्रेस प्रति आश्था छ नमरुन्जेल रहन्छ तर कुटनीतक मर्यादामा कुटनीतिक जिम्मेवारीमा रहुन्जेल मैले एउटा न्यूट्रल भूमिका निर्वाह गरेको छु गर्ने भन्ने कुराको यहाँ प्रतिबद्धता जानउन चाहान्छु । त्यो कुराको यहाँ धेरै माननीय सांसदहरुले भारत भ्रमणका क्रममा त्यहाँ पुग्दाखेरी देख्नुभएको होला । मैले राजदूतावास राजदुत भनेको एउटा पार्टी बिशेषको एउटा ब्यक्ति विशेषका त्यो एउटा प्रभावमा हुनुहुँदैन । त्यो राज्यको एउटा प्रतिनीधि संस्थाको रुपमा रहनुपर्दछ भनेर त्यो हामीले शुरु गरेका छौँ । त्यसलाई निरन्तराता दिनेछु ।
त्यसले गर्दाखेरी हामीले यी कुराहरुलाई मैले तात्कालिक पर्राष्ट्रमन्त्रीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहान्छु । उहाँको सार्वजनिक अभिब्यक्ति के आयो भने अब जहिले पनि एउटा राजदुत भनेको त सरकारले पत्याएर पठाएको राजदूत हुन्छ उसले सम्बन्धित देशलाइ खबर गर्छ आफ्नो पर्राष्ट्र मन्त्रालयलाई खबर गर्छ एक दुइचोटी उहाँले खबर नगरी आएको बाहेक उहाँको कार्यदक्षतालाई खोट लगाउने ठाउँछैन भन्नु भयो ।
माननीय सांसद ज्यूहरुले पनि आफ्नो छलफलमा भन्नु भयो । की सरकारको निर्णयमा कुनै अभियोजन छैन कुनै पनि अभियोजन नभएपछि हामीले काल्पनिक अभियोजनलाई चाहिँ लिएर जान्छौँ भने हामी कहाँ पुग्ने हो ? मेरो कृयाकलापमा मेरो भूमिकामा कतै पनि बायोसनेस छ भने आओस म त्यसलाई स्वागत गर्न चाहान्छु हृदंग मगर्न चाहन्छु । अज्ञानताबस भए मैले त्यसलाई स्वीकार गर्छु सुधार गर्छु होइन भने मैले छैन भनेर सार्वजनिक रुपमानै यी कुराहरुलाई पटक पटक भनिसकेको छु । त्यसैले माननीय सभापति ज्यू हामीले यी कुराहरुलाई अन्तिममा भन्दाखेरी धेरैकुरा राजदुतले चाहेर गर्ने कुरा छैन । गर्ने सम्बन्धित सरकारको निर्णयहरुबाट सम्बन्धमा उतारचढाप आउने हो ।
यसमा राजदुतले सल्लाह दिने कुरा मात्रै हो । राजदूतको सल्लाह कति लिनेनलिने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारको हुन्छ । मैले त्यो बेला सम्मानीय राष्ट्रपति ज्यूको प्रेस कन्फेरेन्समा मैले देखे म भारतमा जाँदैछु भनेर राष्ट्रपति त एउटा मर्यादित संस्था हो राष्ट्रपतिको त्यो मर्यायादित संस्थालाई आँच आउने कुरा नगर्दा नै बेस हुन्छ भनेर मैले भने कै हुँ ।
सल्लाह कति लिनेनलिने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारको हुन्छ
अब त्यस्ता कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो राजदूतलाई अकस्मात फिर्ता बोलाउने काम गरियो मैले त त्यसलाई सहज रुपमा लिएँ । मैले सरकारको बिशेष अधिकार भने राजनीतिक अधिकार हो भने । अहिले पनि जुन किसिमको ठाडो प्रस्तावको निर्णयलाई नेपालका सञ्चार माध्यमहरुले नेपालका बुद्धिजीबीहरुले सबैले यो चाहि वास्तवमा ठीक भएको रहेनछ । सच्चियो बेस भयो भनेको परिपेक्षमा मैले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी सम्झिएको छु ।
प्रस्तावित राजदूत उपाध्यायको बुधबार संसदीय सुनुवाई भएको छ ।